Waaheen Media Group » Hal qof ayaa wax badala !
Browse:Home Articles Hal qof ayaa wax badala !
Published by Waaheen Media on July 14, 2017 | Comments Off on Hal qof ayaa wax badala !
Raimundo wuxuu ahaa 77 jir kunool jidadka iyo darbiyada magaalada Sãu paulo ee dalka Brazil kadib markii uu ku guul dareystay inuu helo baro uu dago, gabbaadna uga noqota qabowga iyo kulaylka.
wuxuu qori jiray gabayo iyo sheekooyin gaaban dadka jidka maraya ayuu uqaybin jiray isaga oo aan waxba kaqaadanaynin, waxayna ahayd waxa kaliya ee farxad galiya kadib markii ay murugadu isku gadaantay noloshiisa isuwada eg!
maalin maalmahankamid ah waxaa soo martay jidkaas gabar lagumagacaabo Shalla oo leh dareen bini aadamnimo oo weyn, wuxuu siiyaya Tix iyo sheeko gaaban oo taabanaysa nolosha dadka kudhaqan deegaankaas kuwaas oo aan helin daryeelkii ay ubaahnaayeen sida hoy, caafimaad, waxbarasho, biyo iyo cunto nadiif ah.
qoraalkii aad ayay ula dhacday Shalla oo ahayd gabar jecel fanka, qoraalka, iyo suugaanta, waxay garab fariisatay Raimundo waqti badanna way laqaadatay si ay wax uga ogaato nolosha iyo aragtida dhibbanahan bushi, baro la,aan, iyo baahidu jirkiisa dileen.
ugu danbeyn Shalla waxay go’aansatay inay caawiso Raimundo kana saarto nolosha adag ee uu kujiro, waxay bilowday in sheekooyinka iyo tixaha uu qoro kufaafiso Internetka iyo baraha bulshada si dad badan ugaaraan.
sheekooyinkii way faafeen waxaana usoojawaabay Shalla hay’addo khayri ah, iyo bulsho badan oo kaxanuunsaday xaaladda Raimundo dhanka kalana kahelay qoraaladiisa farshaxamaysan ee sida tooska ah u abaaraya qalbiga qofka.
muddo yar kadib odaygii 77jirka ahaa baro iyo nololna midna haysan wuxuu helay nolol wanaagsan guri weyn oo dhamaystirana wuu yeeshay muuqaalkiisuna wuu isbadalay.
intaa waxaa dheer inuu noqday qoraa rasmi ah kadib markii madbacad weyn oo buugta daabacda ay go’aansatay in ay daabacdo buugtiisa adduunkana usoo bandhigto hal abuurkiisa waayo aragnimadu kudheehantahay.
gabar ka damqatay dhibka haysta aadamaha ayaa nolosha odaygaa badashay, makufakartay inaad kaqayb qaadatid wanaajinta nolosha aadamaha ama ugu yaraan aad dhibkaaga kadaysid? xigasho Hassan M. Qorane